လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျးအမညျစာရငျး တငျသှငျး ဖို့ ကွံရှယျ နပွေီလား ?
You are at:Home»ထုတျပွနျကွငွောခကျြမြား»လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျးအမညျစာရငျး တငျသှငျး ဖို့ ကွံရှယျ နပွေီလား ?
By Hsu Wai Hnin on	 07-06-2020 ထုတျပွနျကွငွောခကျြမြား, နိုငျငံရေး (P)
ပွညျသူ့အကြိုးအမှနျတကယျ ဆောငျရှကျခငျြတယျ ကိုယျ့ကွောငျ့ ပါတီဂုဏျသိက်ခာမကစြခေငျြဘူး ဆိုလြှငျ အမညျစာရငျးဖောငျမဖွညျ့ခငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မညာတမျးမေးပါ။
ပါတီရဲ့ နိုငျငံရေးမူဝါဒ သဘောတရားနှငျ့ ရညျရှယျခကျြမြား လုပျငနျးစဉျမြားကို အပွီးထိ အနညျးဆုံး တဈခေါကျလောကျ ဖတျဖူးရဲ့လား?
လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး တဈယောကျရဲ့ ကငျြ့ဝတျတှကေို သိပွီလား?
လှတျတျောကိုယျစားလှယျ တဈယောကျရဲ့ တာဝနျ၊ ဝတ်တရားတှကေို နားလညျရဲ့လား?
၂၀၀၈ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒကေို ပိုငျနိုငျရဲ့လား?
သူတဈပါးအပျေါ ကိုယျခငျြးစာနာစိတျ တကယျရှိရဲ့လား?
ဥပဒပွေုရေးကို အမှနျတကယျ ‌နားလညျပွီလား?
စာတဈကွောငျး ဖွောငျ့အောငျရေး၊ စကားတဈခှနျး ဆိုလိုရငျးရောကျအောငျ ပွောနိုငျပွီလား?
ပွညျသူ့လိုအပျခကျြတှေ ဒသေလိုအပျခကျြတှကေို ဖွညျ့ဆညျးဖို့ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ နားထောငျနိုငျတဲ့ နားရှိပွီလား?
ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ နားထောငျပွီး ရပျတညျဖွရှေငျးရဲတဲ့ သတ်တိရော တကယျရှိရဲ့လား?
အမှား အမှနျကို ဆငျခွငျတုံတရားနဲ့ ဝဖေနျစိစဈ ဆုံးဖွတျနိုငျပွီလား?
အစိုးနဲ့ ဌာနဆိုငျရာတှကေို အပွနျအလှနျ ထိနျးကြောငျးနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြးရှိပွီလား?
လှတျတျောကိုယျစားလှယျတဈယောကျ သိထားသငျ့ သိထားအပျတဲ့ ဥပဒေ၊ နညျးဥပဒတှေကေို လလေ့ာဖူးပွီးပွီလား?
ဘတျဂကျြကဏ်ဍ၊ နိုငျငံရေးကဏ်ဍ၊ တရားစီရငျရေးကဏ်ဍ၊ အုပျခြုပျရေးကဏ်ဍ၊ စီးပှါးရေးဆိုငျရာ အသိပညာ၊ အမွျောအမွငျ၊ နိုငျငံတကာရေးရာကဏ်ဍ၊ နညျးပညာကဏ်ဍ၊ တိုငျးရငျးသားရေးရာကဏ်ဍ၊ လြှပျစဈကဏ်ဍ၊ လယျယာမွနှေငျ့ အခွားမွမြေားကဏ်ဍ၊ သဘာဝသယံဇာတမြားကဏ်ဍ၊ လမျး၊ တံတား အခွခေံအဆောကျအဦကဏ်ဍ…… ကဏ်ဍ ကဏ်ဍ ကဏ်ဍ‌တှကေို ငါဘယျလောကျ နားလညျသလဲ…… လလေ့ာဖူးသလဲ…….
တိုငျးပွညျရဲ့ အနာဂတျမြှျောမှနျးခကျြဖွဈတဲ့ ဖကျဒရယျစနဈအကွောငျးကိုရော တီးမိခေါကျမိ ရှိရဲ့လား ?
ဘယျအတိုငျးအတာလောကျထိ လလေ့ာထားသလဲ ……
လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဖွဈခငျြရခွငျးရဲ့ အဓိက အကွောငျးအရငျးက ဘာလဲ???
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မညာတမျး မေးကွညျ့ကွစမျးပါ။
လှတျတျောကိုယျစားလှယျ တဈယောကျရဲ့ သိသငျ့သိအပျ တတျသငျ့ တတျအပျတာတှေ အမြားကွီး ရှိနပေါသေးတယျ..
အားလုံးကို ပညာရှငျအဆငျ့ ကြှမျးကငျြနရေမညျဟု မဆိုလိုပါ။ ဘယျလိုပဲ
ဖွဈဖွဈ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ အရှေးခံမညျ့သူဟာ သာမနျလူထကျ နှာတဈဖြား သာကိုသာနရေပါလိမျ့မညျ။
ယခုလကျရှိ နိုငျငံရေး ရစေီးကွောငျးအရ လှတျတျောဆိုငျရာကဏ်ဍတှကေို ထပျဆငျ့လလေ့ာဖို့ အခြိနျ ၁နှဈ ၁နှဈခှဲသညျ အမြားဆုံးပေးနိုငျတဲ့ အခြိနျပငျဖွဈသညျ။ လှတျတျောရောကျမှ လလေ့ာရငျး နောကျထပျအခြိနျ ၅နှဈ ပွညျသူလူထုမြားအနဖွေငျ့ မပေးနိုငျတော့ပေ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ကိုယျစား ‌လှတျတျော‌တှငျး လှတျတျောပွငျပတှငျ စှမျးဆောငျရညျပွရမညျ့သူကိုတော့ ဂုဏျထူးဝိသသေနှငျ့ပွညျ့စုံသော အမြားက လေးစားအပျသညျ့ ပုဂ်ဂိုလျမြား ကို သာ
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်း တင်သွင်း ဖို့ ကြံရွယ် နေပြီလား ?
ပြည်သူ့အကျိုးအမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်ချင်တယ် ကိုယ့်ကြောင့် ပါတီဂုဏ်သိက္ခာမကျစေချင်ဘူး ဆိုလျှင် အမည်စာရင်းဖောင်မဖြည့်ခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မညာတမ်းမေးပါ။
ပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒ သဘောတရားနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အပြီးထိ အနည်းဆုံး တစ်ခေါက်လောက် ဖတ်ဖူးရဲ့လား?
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေကို သိပြီလား?
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်၊ ဝတ္တရားတွေကို နားလည်ရဲ့လား?
၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပိုင်နိုင်ရဲ့လား?
သူတစ်ပါးအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ် တကယ်ရှိရဲ့လား?
ဥပဒေပြုရေးကို အမှန်တကယ် ‌နားလည်ပြီလား?
စာတစ်ကြောင်း ဖြောင့်အောင်ရေး၊ စကားတစ်ခွန်း ဆိုလိုရင်းရောက်အောင် ပြောနိုင်ပြီလား?
ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်တွေ ဒေသလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားထောင်နိုင်တဲ့ နားရှိပြီလား?
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားထောင်ပြီး ရပ်တည်ဖြေရှင်းရဲတဲ့ သတ္တိရော တကယ်ရှိရဲ့လား?
အမှား အမှန်ကို ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ဝေဖန်စိစစ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီလား?
အစိုးနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာတွေကို အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိပြီလား?
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက် သိထားသင့် သိထားအပ်တဲ့ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေကို လေ့လာဖူးပြီးပြီလား?
ဘတ်ဂျက်ကဏ္ဍ၊ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍ၊ တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍ၊ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ၊ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ အမြော်အမြင်၊ နိုင်ငံတကာရေးရာကဏ္ဍ၊ နည်းပညာကဏ္ဍ၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာကဏ္ဍ၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၊ လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများကဏ္ဍ၊ သဘာဝသယံဇာတများကဏ္ဍ၊ လမ်း၊ တံတား အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ…… ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ‌တွေကို ငါဘယ်လောက် နားလည်သလဲ…… လေ့လာဖူးသလဲ…….
တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်အကြောင်းကိုရော တီးမိခေါက်မိ ရှိရဲ့လား ?
ဘယ်အတိုင်းအတာလောက်ထိ လေ့လာထားသလဲ ……
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ချင်ရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းက ဘာလဲ???
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မညာတမ်း မေးကြည့်ကြစမ်းပါ။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ရဲ့ သိသင့်သိအပ် တတ်သင့် တတ်အပ်တာတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်..
အားလုံးကို ပညာရှင်အဆင့် ကျွမ်းကျင်နေရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ဘယ်လိုပဲ
ဖြစ်ဖြစ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အရွေးခံမည့်သူဟာ သာမန်လူထက် နှာတစ်ဖျား သာကိုသာနေရပါလိမ့်မည်။
ယခုလက်ရှိ နိုင်ငံရေး ရေစီးကြောင်းအရ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေကို ထပ်ဆင့်လေ့လာဖို့ အချိန် ၁နှစ် ၁နှစ်ခွဲသည် အများဆုံးပေးနိုင်တဲ့ အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်ရောက်မှ လေ့လာရင်း နောက်ထပ်အချိန် ၅နှစ် ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့် မပေးနိုင်တော့ပေ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်စား ‌လွှတ်တော်‌တွင်း လွှတ်တော်ပြင်ပတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ပြရမည့်သူကိုတော့ ဂုဏ်ထူးဝိသေသနှင့်ပြည့်စုံသော အများက လေးစားအပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ကို သာ
မွနျမာနိုငျငံသားမဲဆန်ဒရှငျအားလုံးသို့ UBP ၏ ရှေးကောကျပှဲကတိ (၁၂) ခကျြကို ထပျဆငျ့ရှငျးလငျးတငျပွခွငျး
UBP ခေါငျးဆောငျ သူရဦးရှမေနျး၏ အမွငျမြှဝမှေု